XOG:-La wareegitaanka degmada Bu’aale oo loolan uga jira Ciidamada Dowladda & Jubbaland - Awdinle Online
XOG:-La wareegitaanka degmada Bu’aale oo loolan uga jira Ciidamada Dowladda & Jubbaland
February 24, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa bilihii la soo dhaafay ay loolan adag u geleysay in ay la wareegto degmada Buu’aale ee Gobolka Jubbada Dhexe,halkaas oo ah fariisinka ugu weyn ee Al-Shabaab ku leeyihiin Gobolada Jubbooyinka.
Degmada Buu’aale ayaa waxaa ay tahay Xarunta rasmiga ah ee Maamulka Jubbaland maadaama maamulkaas uu haatan si KMG ah ugu Shaqeeyo Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Dowladda ayaa horay u sheegtay inayan aqoonsaneyn doorashada ka dhacdey magaalada Kismaayo ee lagu doortay Axmed Madoobe,waxaana taas bedelkeeda ay ka bilaawdey deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland abaabul dhinac walba ah oo looga soo horjeedo Axmed Madoobe.
Maamulka Jubbaland ayaa dhankooda waxaa ay wadaan sidii ay ula wareegi lahaayeen degmada buu’aale,waxaaana Ciidanka Maamulkaas ay maalmahana wadeen dhaq dhaqaaqyo Ciidan,in kastoo ay la howlgallayaan Ciidanka DANAB ee ku sugan deegaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay Ciidamo farabadan geysay deegaano ka tirsan Gobolka Gedo,halka Ciidanka dowladda ay howlgallo ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maalmahaan waxaa uu sidoo kale waday abaabul dagaal oo ka dhan ah Ururka Al-Shabab,isaga oo kulamo kala duwan la qaatay Saraakiisha ugu sareysa Jubbaland.
Dadka falanqeeya siyaasada dalka ayaa waxaa ay sheegeen in Dowladda Federaalka ay qorsheyneyso inay la wareegto Caasimadda Jubbaland ee degmada buu’aale si ay ugu qabato doorashada Madaxweynaha Jubbaland si uu meesha uga baxo Axmed Madoobe.
Lama oga halka uu ku dambeyn doono loolanka Milateri oo ay wadaan Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo mid kasta uu ku doonayo in uu kula wareego degmada Bu’aale ee gobolka Jubbada Hoose.
Previous articleDaawo:-Madaxweynaha Koofur Galbeed oo Xil ka qaadis iyo Magacaabis ku sameeyay Wasiiro katirsan Maamulkiisa.
Next articleDhageyso :-Dignin loo diray siyaasiyiinta mucaaradsan dowlada soomaaliya